Tatitra famantarana Om | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy misy ny marika Om, ara-panahy amin'ny hoditra
Rehefa mitady endrika hamoronana tatoazy isika, raha tsy efa mazava izay tiantsika, miantehitra amin'ny zavatra izay misy dikany betsaka ho antsika isika, toy ny marika Om. Ary tsy afaka manadino isika fa hitafy azy mandritra ny androm-piainantsika izany, ka tsy maintsy ho zavatra izy io tena mahatratra antsika izany ary tsy hoe hatsarana fotsiny izany.
Izany no antony hiresahantsika anio momba ny marika iray tena lalina, malaza ary manome aingam-panahy miaraka amin'ny fahafaha-manao maro samy hafa, araka ny ho hitantsika etsy ambany. Tokoa, miresaka momba ny tombokavatsa misy ny marika Om isika. Raha ny tokony ho izy, mamporisika anao ihany koa izahay hijery ity lahatsoratra mifandraika ity amin'ny Tatoazy yoga, lisitra feno ho an'ny aingam-panahy.
1 Ny dikan'ny tatoazy Om
2 Aiza no ahitantsika an'io tandindona io?
3 Hevitra momba ny tatoazy om
3.2 Mantra manontolo
3.3 Om amin'ny tratra
3.4 Ganesha, andriamanitra elefanta
3.5 Om with unalome
3.6 Hamsa sy Om
3.7 Tatoazy marika Om miaraka amin'ny hazo
3.8 Tattoos misy voninkazo lotus
Ny dikan'ny tatoazy Om
Araka ny efa nolazainay, ny iray amin'ireo tandindona natao tatoazy indrindra dia ny Om. Izy io dia iray amin'ireo mantra masina indrindra amin'ny fivavahana dharmika, maneho ny Brahman masina sy an'izao rehetra izao izy. Ho an'ny Hindus dia ny feo primordial, ny niandohana sy ny fitsipiky ny ankamaroan'ny mantra, teny na feo na feo mahery. Ao amin'ny marika Om, isika dia mialoha ny zava-dehibe. Etsy ankilany, midika ho firaisan-kina amin'ny avo sy avo, ny firaisana eo amin'ny ara-panahy sy ny ara-batana. Io no vanin-teny masina, izay feo niavian'ny feo hafa rehetra.
Amin'ny haavon'ny tatoazy dia manolotra endrika manokana izy, izay niavian'ny ara-panahy, ary ny fiolahana telo dia midika ho fahatsiarovan-tenan'ny olombelona sy ny trangan-javatra ara-batana rehetra. Ny teboka famantarana dia ny fanjakana avo indrindra amin'ny fahatsiarovan-tena, ny firaisankina, ny hery.
Raha ny marina, ny fanononana ny vaninteny Om dia mifandray amin'ny dikany telo lehibe izany dia mahafaoka izay rehetra nolazainay. Araka izany, rehefa dinihina fa toa mitovy kokoa ny fanononana fanononana ao amin'ny M:
La a dia maneho ny fiandohana, ny zavaboary nampitomboin'i Brahma, andriamanitra mpamorona.
La u izany dia ny fitohizan'ny fiainana, hita taratra amin'ny andriamanitra Vishnu.
Ary farany, ny m Izy io dia tandindon'i Shiva, andriamanitra mpanimba.
Ireo andriamanitra telo ireo dia mirakitra ny trimurti, andriamanitra telo izay mitana ny fandanjana an'izao tontolo izao, ary midika iray hafa amin'ny dikany farany amin'ny marika Om, ny fifandanjana ilaina amin'ny fitohizan'ny fisian'ny iray manontolo.
Aiza no ahitantsika an'io tandindona io?
Ny marika Om dia fantatry ny besinimaro rehetra, na dia teo Andrefana aza vao tsy ela akory izay. Talohan'ny tena nanatrehany izany tao amin'ireo fivavahana lehibe tany India, Hindoisma, Buddhism ary Jainism, izay fahita matetika no ahitana azy roa amin'ny soratra masina, toy ny amin'ny tranobe, sary sokitra ary karazan-toerana rehetra tianao hampipoitra ny dikany. Ho fanampin'izany, azo soratana amin'ny fomba maro samihafa izy, na amin'ny fiteny sanskrit, Tibetana, koreanina ... izay mahatonga azy io ho an'ny tatoazy miaraka amina lahatsoratra.
Ity dia avy amin'ny taona 60, miaraka amin'ny yoga, rehefa nisy fipoahana ara-panahy nitazona ny zavatra rehetra avy tany Atsinanana, ary indrindra fa avy any India.
Hevitra momba ny tatoazy om
Araka ny hitanao tao amin'ny fizarana teo aloha, ny fananana ny tombokavatsa marika Om dia midika, amin'ny fitsipika ankapobeny, fa ny tatoazy dia mihoatra ny tatoazy estetika.
Ny iray amin'ireo endrika maro azon'ny tatoazy manasongadin'ity tandindona ity dia tena kely dia kely. Ny maha madio sy kanto an'io marika io dia toa tsara, ankoatr'izay, kely dia kely dia tsara amin'ny toerana rehetra toy ny fomba fijery mifanohitra: amin'ny tanana, rantsantanana, kitrokely ...
Tsy ny olona ihany no miaina amin'ny Om, raha te-hiaraka aminy amin'ny zavatra hafa ianao, Azonao atao ny misafidy ny manao tatoazy amin'ny mantra iray manontolo izay manana an'io marika io ho ilay protagonista. Satria misy abidia maro be izay azo soratana, safidio ilay iray izay misy ifandraisany indrindra amin'ny mantra tianao. Mazava ho azy, alao antoka fa voasoratra tsara izy io!
Om amin'ny tratra
Ny endrika boribory Om dia toa tsara amin'ny toerana maro. Ny tratra dia iray amin'ireo tsy ampoizina indrindra. Na miaraka amin'ny mantra, toy ny amin'ny sary, na irery, dia hevitra lehibe iray fa misy mandala iray koa ankehitriny hanome ny halalin'ny fitambarana. Milalaova amin'ny aloka sy volony (tsipika manify na matevina, teboka ...) hanaovana hypnozy ny endrika.
Ganesha, andriamanitra elefanta
Iray amin'ireo mpihetsiketsika lehibe manao tombokavatsa miaraka amin'ny marika Om ny andriamanitra Ganesha, izay zanaky ny andriamanitra roa noresahintsika tetsy ambony. Io andriamanitra elefanta io, izay voalaza fa nanampy tamin'ny fanesorana ireo sakana, dia mifandray akaiky amin'ny marika Om. Raha ny marina, ny mantra dia oṃkārasvarūpa, 'Om no endriny' satria inoana fa endrika ara-batana amin'ilay hevitra ao ambadik'ilay marika.
Ny tatoazy Ganesha dia milay be amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny loko, mainty sy fotsy, amin'ny antsipirihany na misy karazana kariketra, na dia misy aza ny fironana hametraka ny marika Om amin'ny handriny. Araraoty ny fotoana hanasongadinana azy, ohatra, amin'ny tombokavatsa amin'ny loko mainty sy fotsy tanteraka ary misy antsipiriany mena, na miaraka aminy miaraka amin'ny mantra rehetra azy mba hanomezana azy fomba hafa sy miavaka.
Om with unalome
Efa niresaka momba ny tsy fahita amin'ny tranga hafa isika. Ny maha andalana fiainana, ary maneho ny zava-tsarotra rehetra sendra anay teny an-dalana, ny farany voajanahary dia amin'ny fanehoana ny Om izay manondro fa tonga amin'ny toetry ny fahafenoana sy fahazavana isika.
Hamsa sy Om
Kolontsaina roa toa lavitra be amin'ny famolavolana iray izay toa tsara be. Ny hamsa dia mariky ny fiarovana amin'ny fanahy ratsy izay mahazatra ny kolontsaina Arabo sy Jiosy. Amin'ity tranga ity, ny endrika dia manambatra ny tànan'ny rantsan-tanana hamsa miaraka amina marika Om fa tsy ny maso voalohany.
Tatoazy marika Om miaraka amin'ny hazo
Hitanao fa ny marika Om dia azo atambatra amina endrika maro samihafa, ary koa habe sy toerana samihafa. Amin'ity tranga ity dia natambatra tamin'ny hazo ny tatoazy (tandindona mitambatra tsara, satria ny hazo koa dia mifandray amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao, ary indrindra amin'ny natiora) azo antoka fa mahavariana raha vao miloko na aloka.
Tattoos misy voninkazo lotus
Farany, maneho hevitra fa io marika io, ny Om, mahazatra ny manao tombokavatsa azy amin'ny voninkazo lotus. Tandindona iray hafa miaraka amin'ny hery lehibe, ary izany dia ny voninkazo lotus dia afaka teraka ao anaty fotaka, mifehy ny mari-pana sy ny antsipiriany tsy manam-petra mba hifanaraka sy haterana na aiza na aiza. Mariky ny tanjaka sy fahadiovana io.
Ny tatoazy misy ny marika Om dia tena mahaliana na amin'ny resaka hevitra na dikany, sa tsy izany? Lazao aminay, manana tatoazy mitovy amin'izany ve ianao? Inona no dikan'izany aminao? Toy ny mahazatra, raha sahy ianao mizara ny tatoazy aminay dia faly izahay manampy anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy ara-pinoana » Tatoazy misy ny marika Om, ara-panahy amin'ny hoditra
Camilo Uribe dia hoy izy:
Salama, te-hanao tombokavatsa Gayatr Mantra aho fa tsy haiko raha misy fameperana satria tandindona masina io: tiako apetraka amin'ny soroko ankavanana (tsy maninona na havia na havanana) any. misy fameperana ve momba ny famolavolana (noho ny yantras sy ny hafa)? Misaotra anao, antenaina fa afaka manampy ahy ianao. Miarahaba.
Valiny tamin'i Camilo Uribe
Tatoazy ati-doha sy fo, fitambarana mahaliana tokoa!
Tatoazy famaky, fanangonana ny endrika sy ohatra